နောက်ဆုံးထွက် Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ ဘယ်ဖုန်းက ဘက်ထရီအားအခံဆုံးလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
နောက်ဆုံးထွက် Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ ဘယ်ဖုန်းက ဘက်ထရီအားအခံဆုံးလဲ??
ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ အရေးတကြီးစဉ်းစားရမယ့်အချက်က ဘက်ထရီသက်တမ်းဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ဘယ်ဖုန်းက ဘက်ထရီပိုအားသာလဲဆိုတာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းလို့လည်းမရတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ လက်ရှိဈေးကွက်မှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Flagship ဖုန်းတွေရဲ့ ဘက်ထရီအားခံမှုကို နှိုင်းယှဉ်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု ထွက်လာပါတယ်။ ယှဉ်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကတော့ OnePlus 6, LG G7, Galaxy S9 Plus, iPhone X, Google Pixel2XL နဲ့ Huawei P20 Pro တွေပါပဲ။
ဖုန်းတစ်လုံးစီတိုင်းကို Brightness အမြင့်ဆုံးထား၊ Wi-Fi network တူတူကိုချိတ်ပြီး Social Media အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲ တစ်ပြိုက်နက်သုံးပြီး စမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်ဖုန်းတွေက ယ်အချိန်မှာဘယ်လောက်အားကျန်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာတော့ အခုပြထားမယ့်ဖုန်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ ဘယ် Display သုံးထားလဲ ဘက်ထရီဘယ်လောက်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပထအတုံး ဗီဒီယိုဂိမ်းကို မိနစ်၃၀လောက်ဆော့လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းတစ်လုံးစီက အနည်းဆုံး 91% လောက်ကျန်တာတွေ့ရပါတယ်။ (အဲ့ထဲကမှ P20 Pr င 94% နဲ့ကျန်ခဲ့သူပေါ့) ပြီးတော့ Instagram ရဲ့ “Explore” section ကို တစ်နာရီလောက် တူတူဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ iPhone X က 87%, LG G7 ကတော့ 77% ထိကို ရောက်သွားပါတယ်။ နောက် Google Maps ကို မိနစ် ၃၀လောက်ဖွင့်ပြီး 1080p ဗီဒီယိုတွေကို မိနစ်၃၀ လောက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ ဖုန်းတစ်လုံးစီက ၅၀% ကျော်ကျော်မှာကျန်နေပါသေးတယ်။ အဲလိုနဲ့ ၂နာရီခွဲလောက်စမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ LG G7 က 52% လောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
YouTube ဗီဒီယိုတွေကို ၂နာရီလောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Huawei က 56% နဲ့ဗိုလ်ဆွဲနေပြီး LG G7 ကတော့ 25% ထိကိုရောက်သွားပါပြီ။ နောက်ထပ် တစ်နာရီဝဘ်ဆိုဒ်သုံး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် auto-play watch page ကို ၁နာရီလောက်ကြည့်ပြီး ဘယ်ဖုန်းအရင်ဆုံးအားကုန်မလဲသိဖို့ SoundCloud ကို ၂နာရီလောက် Streaming ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၆နာရီနဲ့ ၄၅မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာ LG G7 အရင်အားကုန်သွားပါပြီ။ ကျန်တာတွေဆက်စမ်းဖို့ YouTube ကိုပြန်သွားပါတယ်။
နောက်တစ်လုံးကတော့ ၉နာရီနဲ့ ၅မိနစ်အကြာမှာ အားကုန်သွားတဲ့ Pixel2XL ပါ။ Pixel မှာ သုံးထားတဲ့ Snapdragon 835 တွေထက် Snapdragon 845 တွေက ၃၀%လောက် စွမ်းအင်ပိုချွေတာနိုင်တဲ့အတွက် SD 845 သုံးထားတဲ့ P20 Pro က ကြာကြာခံနိုင်နေတာပါ။ iPhone X လည်း တူတူပါပဲ။
နောက်ကုန်သွားတဲ့တစ်လုံးကတော့ ဘက်ထရီအနည်းဆုံးပေမယ့် ကိုးနာရီခွဲလောက်ခံတဲ့ iPhoneX ပါ။ Galaxy S9 Plus ကတော့ ၁၀နာရီလောက်သုံးပြီးချိန်မှာကုန်သွားပြီး နောက်ထပ်မိနစ်၄၀အကြာမှာတော့ OnePlus6ကုန်သွားပါတယ်။
နောက်ဆုံး အောင်နိုင်သူကတော့ ဘက်ထရီပမာဏအများဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၁နာရီလောက် အားခံသွားတဲ့ Huawei P20 Pro ပါပဲ။ ဒါတွေက ဘက်စုံသုံးပြီးစမ်းသပ်ထားရုံပါပဲ။ Flagship ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီမှာ သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အားသာချက်တွေရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တာပဲ ကိုယ်ရွေးဝယ်ကြမှာပါပဲ။ အောက်မှာတော့ ဘယ်ဖုန်းတွေ ဘယ်လောက်အားကုန်သွားလဲဆိုတဲ့ “DigitalTrends” ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုနျးအသဈတဈလုံးဝယျပွီဆိုတာနဲ့ အရေးတကွီးစဉျးစားရမယျ့အခကျြက ဘကျထရီသကျတမျးဘယျလောကျခံလဲဆိုတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဖုနျးတဈလုံးနဲ့တဈလုံး ဘယျဖုနျးက ဘကျထရီပိုအားသာလဲဆိုတာတော့ကိုယျကိုယျတိုငျစမျးလို့လညျးမရတော့ မသိနိုငျပါဘူး။ ကံကောငျးခငျြတော့ လကျရှိဈေးကှကျမှာအကောငျးဆုံးလို့ပွောလို့ရတဲ့ Flagship ဖုနျးတှရေဲ့ ဘကျထရီအားခံမှုကို နှိုငျးယှဉျပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခု ထှကျလာပါတယျ။ ယှဉျပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတှကေတော့ OnePlus 6, LG G7, Galaxy S9 Plus, iPhone X, Google Pixel2XL နဲ့ Huawei P20 Pro တှပေါပဲ။
ဖုနျးတဈလုံးစီတိုငျးကို Brightness အမွငျ့ဆုံးထား၊ Wi-Fi network တူတူကိုခြိတျပွီး Social Media အကောငျ့တဈခုတညျးကိုပဲ တဈပွိုကျနကျသုံးပွီး စမျးကွညျ့တဲ့အခါ ဘယျဖုနျးတှကေ ယျအခြိနျမှာဘယျလောကျအားကနျြလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ အောကျမှာတော့ အခုပွထားမယျ့ဖုနျးအမြိုးအစားတှနေဲ့ ဘယျ Display သုံးထားလဲ ဘကျထရီဘယျလောကျလဲဆိုတာကို ဖျောပွထားပါတယျ။
ပထအတုံး ဗီဒီယိုဂိမျးကို မိနဈ၃၀လောကျဆော့လိုကျတဲ့အခါမှာ ဖုနျးတဈလုံးစီက အနညျးဆုံး 91% လောကျကနျြတာတှရေ့ပါတယျ။ (အဲ့ထဲကမှ P20 Pr င 94% နဲ့ကနျြခဲ့သူပေါ့) ပွီးတော့ Instagram ရဲ့ “Explore” section ကို တဈနာရီလောကျ တူတူဖှငျ့လိုကျပွီးတဲ့အခြိနျမှာတော့ iPhone X က 87%, LG G7 ကတော့ 77% ထိကို ရောကျသှားပါတယျ။ နောကျ Google Maps ကို မိနဈ ၃၀လောကျဖှငျ့ပွီး 1080p ဗီဒီယိုတှကေို မိနဈ၃၀ လောကျရိုကျလိုကျတဲ့အခါ ဖုနျးတဈလုံးစီက ၅၀% ကြျောကြျောမှာကနျြနပေါသေးတယျ။ အဲလိုနဲ့ ၂နာရီခှဲလောကျစမျးပွီးတဲ့အခါမှာ LG G7 က 52% လောကျပဲကနျြပါတော့တယျ။
YouTube ဗီဒီယိုတှကေို ၂နာရီလောကျကွညျ့ပွီးတဲ့အခါမှာတော့ Huawei က 56% နဲ့ဗိုလျဆှဲနပွေီး LG G7 ကတော့ 25% ထိကိုရောကျသှားပါပွီ။ နောကျထပျ တဈနာရီဝဘျဆိုဒျသုံး၊ ဖစျေ့ဘှတျချ auto-play watch page ကို ၁နာရီလောကျကွညျ့ပွီး ဘယျဖုနျးအရငျဆုံးအားကုနျမလဲသိဖို့ SoundCloud ကို ၂နာရီလောကျ Streaming ဖှငျ့လိုကျပါတယျ။ စုစုပေါငျး ၆နာရီနဲ့ ၄၅မိနဈကွာတဲ့အခါမှာ LG G7 အရငျအားကုနျသှားပါပွီ။ ကနျြတာတှဆေကျစမျးဖို့ YouTube ကိုပွနျသှားပါတယျ။
နောကျတဈလုံးကတော့ ၉နာရီနဲ့ ၅မိနဈအကွာမှာ အားကုနျသှားတဲ့ Pixel2XL ပါ။ Pixel မှာ သုံးထားတဲ့ Snapdragon 835 တှထေကျ Snapdragon 845 တှကေ ၃၀%လောကျ စှမျးအငျပိုခြှတောနိုငျတဲ့အတှကျ SD 845 သုံးထားတဲ့ P20 Pro က ကွာကွာခံနိုငျနတောပါ။ iPhone X လညျး တူတူပါပဲ။
နောကျကုနျသှားတဲ့တဈလုံးကတော့ ဘကျထရီအနညျးဆုံးပမေယျ့ ကိုးနာရီခှဲလောကျခံတဲ့ iPhoneX ပါ။ Galaxy S9 Plus ကတော့ ၁၀နာရီလောကျသုံးပွီးခြိနျမှာကုနျသှားပွီး နောကျထပျမိနဈ၄၀အကွာမှာတော့ OnePlus6ကုနျသှားပါတယျ။
နောကျဆုံး အောငျနိုငျသူကတော့ ဘကျထရီပမာဏအမြားဆုံးဖွဈပွီး ၁၁နာရီလောကျ အားခံသှားတဲ့ Huawei P20 Pro ပါပဲ။ ဒါတှကေ ဘကျစုံသုံးပွီးစမျးသပျထားရုံပါပဲ။ Flagship ဖုနျးတဈလုံးခငျြးစီမှာ သူ့ဆိုငျရာဆိုငျရာ အားသာခကျြတှရှေိတဲ့အတှကျ ကိုယျကွိုကျတာပဲ ကိုယျရှေးဝယျကွမှာပါပဲ။ အောကျမှာတော့ ဘယျဖုနျးတှေ ဘယျလောကျအားကုနျသှားလဲဆိုတဲ့ “DigitalTrends” ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Oppo က တြိဂံပုံ Notch ပါတဲ့ F9 ကို ကြေညာ
ဖုန်းကို PC နဲ့ ချိတ်သုံးနိုင်မယ့် Your Phone app ကို Windows 10 မှာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ